Faa'iidooyinka Matte Black jiida Down Kushiinka qasabada-Jikada qasabadaha, Filter filler, Musqusha qasabadaha
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Faa'iidooyinka Matte Black jiido Down Jikada qasabad
2020 / 10 / 28 QoondayntaTilmaamaha qasabada 1034 0
Muuqaalka hoos-u-riix ee qasabadaha jikada ayaa u muuqda isbeddel sii kordhaya maalmahan. Gaar ahaan markaan ka hadlayno Matte Black jiido tuubada Jikada ku habboonaanteeda iyo muuqaalkeeda xiisaha leh layaab ma leh. Waxay kaa caawineysaa wax badan si kor loogu qaado shaqada dhaqidda suxuunta iyo sidoo kale hagaajinta jikadaada.
Waxaa laga heli karaa si gaar ah ugu habboon haddii aad si joogto ah ugu baahan tahay dheriyo wax lagu raro oo saaran miiska dushiisa ama dusha sare ee diyaarinta cuntada. Waxaad si habboon u buuxin kartaa sidoo kale jug ku yaal sagxadda dhulka haddii aad rabto, adigoon isticmaalin nooc kasta oo qalab ah oo lagu daray. Aynu wax yar ka iftiiminno waxtarrada aad ka heli karto noocaas qaab dhismeedka qasabadda ee jikadaada.
Faa'iidooyinka qasabadda hoos loo jiido
Tubooyinka jiidaya ee hoos u jiidaya waa kuwa leh madaxa buufinta la saari karo oo ku xiran tuubbo dhex marta jirka tuubada. Tuubbada tuubbada waxaa caadi ahaan lagu hayaa saa'ido gaar ah oo ku jirta gudaha xabka. Waxay ka dhigaan waxqabadka tuubbada tuubbada mid jilicsan. Kaladuwanaanta ballaaran ee Qolka jikada madoow laga bilaabo magacyada ugu waxtarka badan ee leh astaamahan waxay ka caawiyaan shakhsiyaadka inay ka dhigaan shaqooyinkooda meelaha wax lagu kariyo mid fudud.
Waxaa jiray carqalado kala duwan oo ka imanayay astaantan mid waxtar leh. Waxaa si deg deg ah loo fahmay in tuubada meesha madaxa wax lagu buufiyo uusan si xoogan ugu nasanayn meesha ay ku taalo marka aan la isticmaalin ay tahay wax laga xumaado halkii laga fiicnaan lahaa. Dadaal badan ayaa ay sameeyeen hogaamiyaasha qasabadaha jikada si ay u ogaadaan habka ugu wanaagsan ee kaliya sida loo ilaaliyo madaxa buufinta si aamin ah oo saxan.
Kee kugu habboon adiga?
Hase yeeshe qadarinta ugufiican waa in loo fidiyaa kuwa qasabada jikada jiidaya ee isticmaala aaladda madaxa lagu buufiyo birlabta. Meelaha jikada ee kushiinka noocan ah, magnets adag ayaa lagu dhex daray xuubka dareeraha iyo sidoo kale madaxa buufinta laftiisa. Nidaamkani wuxuu bixiyaa gujis casri ah marka madaxa buufintu dib ugu laabto meeshiisii. Saxiixa lala saxeexan yahay waa wax aan la ogaan karin, sidoo kale ma jiro wax guuritaan ah iyo waliba cago jiid. Madaxa ayaa lagaa saari karaa iyadoo la jiido khafiif ah; si kastaba ha noqotee, sidoo kale way kafiican tahay in wax yar loo beddelo illaa magnetku ka duwan yahay.
Maxaad u door bidaysaa buufinta hoos u soo riixda?
Tubbada leh madaxa buufiska hoos u jiida ama usha ayaa badiyaa laga doorbiday tuubada leh buufis kale. Bilowgu ma yeerayo furitaan dheeri ah oo loogu talagalay dejinta, sidoo kale adeegsiga ayaa ah mid dhib badan oo dhib la'aan ah marka loo eego inay ka dhib yar tahay wax ka qabashada hal shey marka loo eego 2.
Waxaa jira shaqooyin kale oo kala duwan oo kala duwan oo ku jira meelaha wax lagu kariyo ee wax ku oolka ah ee wax ku oolka ah ee lashaqeeya muuqaalka soo jiidaya ee qaab wanaagsan. Heerka taabashada xasaasiga ah ayaa ah hal tusaale. Waad ku shaqeyn kartaa taabasho fudud markaad usha wax ka qabaneyso.
Waxaa jira noocyo badan oo qasabadaha jikada ah oo laga heli karo suuqa; waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad mid doorato iyadoo loo eegayo miisaaniyadaada iyo booskaaga Haddii aad wali ku jahwareersan tahay doorashada saxda ah, waxaad sidoo kale la tashan kartaa naqshadeeyahaaga gudaha talobixin xirfad leh.
Hore:: Waa Maxay Nooca Qashin-qubka Jinkayga Ayaan U Rabaa Jikadeyda? Next: Sidee Loogu Badalaa Tuubada Jikada?